Arch Banner Stand
Rainbow Arch stand
Arch banner stand inobata zvakanyanya ziso uye inotakurika chiitiko mhinduro yemukati kana kunze.Izviinotakurika chiitiko archinogona kushandiswa yega kana maviri arch mabhenji pamwe chete sekamuri, inowanikwa mumatatu matatu.Kusvika ku8 pcsbeach flags inogona kugovera mabhesi akafanana sesarudzo.
Applications:Indoor & Outdoor Advertising, Mhemberero, Zviratidziro, Zviratidziro, Zviitiko, Kushambadza, Michato, Mapati, zvitoro nezvitoro, Misika, Auto Shows nezvimwe.
Iyo arch stand inogona kushandiswa yega, kushanda semumvuri wekusimudzira mota kana gedhi rekugamuchira rechitoro
Kushandisa maviriChiitiko Archeskuyambuka pamwe chete, Vachashanda setende mune chiitiko chekunze, kana kugadzira nzvimbo yekukurukurirana bhizinesi mukuratidzira kwekutengesa.
Extramireza yemahombekombeinogona kuiswa pachigadziko chesimbi cheArch stand, ita kuti arch gedhi rako riwedzere kutaridzika uye kuratidza ruzivo rwekushambadzira kubva kwakasiyana maonero.
Saizi hombe yekuratidzira mudivi rimwechete kana maviri side kudhinda.Machira anochinjika magirafu anoita kuti iwe ugone kuzorodza kana kugadzira mameseji matsva zviri nyore pachiitiko chinotevera.
3 saizi sarudzo, 3m upamhi, 4m upamhi uye 5m upamhi.Iyo arch banner yepamusoro chimiro inogona kutetepa uye yakafara nekushandura yepamusoro bhaa yekutsigira.
Carbon composite frame pole, chikamu chega chega chakareba 1.15m uye chakabatanidzwa netambo elastic iyo inogona kudzivirira kurasika uye kuita kuti zvive nyore kuisirwa, Huremu huno huremu, furemu inochinjika inogona kuunganidzwa nyore mumaminitsi pasina maturusi kana manera.
2 base mhando dziripo, Premium simbi base kana kongiri base, zvinoenderana nebhajeti rako uye nzvimbo yekushandisa.Mvura inorema bhegi inogona kuwedzerwa pamusoro pekugadzikana kuri nani.
Iyo premium metal base uremu 13kg, kunze kweiyo beaflag yakawedzerwa yakaiswa, isu tine mamwe mapoinzi ekutengesa ehutsva: vhiri kune rimwe magumo uye buri rekubata kune rimwe divi;danda rose / simbi base / bhegi remvura / rakadhindwa banner rinogona kurongedzwa pamwe chete mubhegi rekutakura rinouya nesimbi base, kungobata uye vhiri kunze, shanda sesutu kesi, iri nyore uye nyore kutakura.
Akacherechedza:Kana kushandisa Arch banner Kunze, inokurudzirwa kushandiswa mumhepo isingasviki level 5
(1) Saizi diki yekurongedza asi yakakura yekuratidzira nzvimbo, yekufambisa kureba 1.15m chete
(2) Matanda akabatanidzwa netambo dzeelastiki, zviri nyore kubatanidza
(3) Nyore kumisikidza uye Hapana mimwe michina inodiwa.
(4) Yakasiyana base uye yekuwedzera-pane bhegi remvura iripo
(5) Mureza unogona kugovera hwaro hwakafanana kuita kuti dumba rako riwedzere kutarisisa maziso
(6) Inouya nebhegi rekutakura, chigadziko chesimbi chine mavhiri, kuitira nyore kutakura uye kuchengetedza
Item code Size Display Dimensions Kurongedza saizi
Zvakapfuura: Tende Musoro Banner
Zvinotevera: Bali Banner